အက်ပဲလ်က developer များအားသူတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များကို iPhone X နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရန်တိုက်တွန်းသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
iPhone အသစ်များ၏ဟာ့ဒ်ဝဲကိုပြောင်းလဲသည့်အခါ application များသည်အမြဲတမ်းအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းနမူနာတစ်ခုသည် ၃၂ မှ ၆၄ bits မှပစ္စည်းများ၏ဗိသုကာတွင်ခုန်ချခြင်းသို့မဟုတ် Retina မျက်နှာပြင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ iPhone X ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းသည် Apple သမိုင်းတွင်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဒီဟာ ပန်းသီးကြီးသည် developer များကိုပစ်မှတ်ထားသည် သူတို့ရဲ့ applications များလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သူတို့ကိုတိုက်တွန်းကြသည် ဆန့်ကျင်အကြံပေးသစ်ကို၏ဒီဇိုင်းနှင့် interface ကိုရန် ဒီဇိုင်းအသစ်ကိုတိုက်ခိုက်ပါ, အ rounded အနားနှင့်ထစ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာအစသေချာ Apple ကအဆောက်အ ဦ App Store မှအက်ပ်များကိုလွယ်ကူစွာပြောင်းရန်။
developer များကသူတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းများကို iPhone X နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်လိုသည်
iPhone X ပေါ်ထွန်းလာခြင်းသည် developer များယခုအထိလုပ်ဆောင်နေသောအပြောင်းအလဲကိုဆိုလိုသည်။ လျှောက်လွှာများ iPhone X ရဲ့မျက်နှာပြင်အသစ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် နှင့်ကိရိယာအသစ်ရှိနိုင်ပါသည်နည်းပညာအားလုံးပမာဏ။ ဥပမာတစ်ခုမှာ Bionic A11 ချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအတွင်းပိုင်းတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်စွမ်းအားမြင့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ကြီးမားသောအာရုံကြောကွန်ရက်များ ကြောင်းအတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူ, ကြီးသောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးရဲ့ထိပ်ပိုင်းကစာသားက Apple မှပေးပို့သောစာ developer များအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏သိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏသည်ရောင်းအားမှတ်တမ်းများကိုချိုးဖောက်နေသောစက်ပစ္စည်း၏ဆိုက်ကပ်မှုအတွက်သူတို့၏ application များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူပန်းသီးကြီးသည်ဤအလုပ်အတွက်တီထွင်သူများကိုတောင်းဆိုသည် ဒါဟာအစအဆောက်အ ဦ ပေးထားပါတယ်.
ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ Mac App Store ရှိ Xcode update အသစ်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသော iPhone X ပေါ်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် Face ID ၏ဆိုက်ရောက် အက်ပလီကေးရှင်းဆောက်သူများထံမှမည်သည့်ကုဒ်မျဉ်းမျိုးမလိုအပ်ပါ Apple ကအစားထိုးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် Touch ID ကိုသုံးသောထိုအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖန်တီးသူအကောင့်ထဲသို့ယူရန်အကြံပြုသည် ထစ် iPhone X အသစ်၏အာရုံခံကိရိယာနှင့်ဖုန်းအသစ်ရှိသည့်အဝိုင်းထောင့်များ၏အကြောင်းရင်း။ ထို့ကြောင့်, Cupertino ခြယ်လှယ်ဆန့်ကျင်အကြံပေးသို့မဟုတ် juego အကောင့်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသောဤဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » NOTICIAS » အက်ပဲလ်က developer များအားသူတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းကို iPhone X နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်
ထို့အပြင် Face ID ရောက်ရှိခြင်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းများတီထွင်သူများအတွက်မည်သည့်ကုဒ်အမျိုးအစားမျှလိုအပ်မည်မဟုတ်သောကြောင့် Apple သည် Touch ID ကိုသုံးသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအလိုအလျောက်အစားထိုးလိမ့်မည်။ "
ပထမဆုံးနေ့က TouchID ကိုသုံးခဲ့တဲ့ app တွေအားလုံး FaceID ကနေအကျိုးကျေးဇူးရတယ်။ အက်ပ်ထဲမှာ (သူတို့မပြုပြင်ခဲ့ရင်) လက်ဗွေရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့မျက်နှာကိုတကယ်သုံးလိမ့်မယ်။
အမှန်မှာ၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် Touch ID နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးသည် Face ID နှင့်အလိုအလျောက်သဟဇာတမဖြစ်မည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမည်ဖြစ်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းများအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှလုံခြုံရေးစနစ်အား developer များနှင့်ပေါင်းစပ်ရန် developer များကခွင့်ပြုရမည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် Touch ID သည်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးမြန်ဆန်ပုံရသည်၊ အခြားသူများအတွက်မူပိုမိုမြန်ဆန်သောအလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့်နိုင်ငံစုံဖြစ်ပြီးအခြားသူများထက်သင်၏ privacy ကိုမည်မျှလေးစားသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်နိုင်ငံစုံဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ လက်ဗွေ၊ မျက်နှာစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ငါထင်လွန်းစုဆောင်းသောဒေတာ။ အရာအားလုံးလိုပဲမြင်ရဖို့လိုလိမ့်မယ်၊ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်ပေမယ့်တခြားအရာတွေနည်းနည်းတော့ပြောလို့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးငါဖတ်ဖူးတာပဲ။ ဒါပေမယ့်အနာဂတ်မှာဒီအရာတွေထဲကတစ်ခုရရင်အဲဒါမပြောင်းသေးဘူးဆိုရင် Touch ID ပြန်လာခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်တစ်သက်တာ PIN နံပါတ်နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မဟုတ်တော့ပါ။
သင်၏ WhatsApp စကားပြောဆိုမှုများကို iPhone အသစ်သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း